प्रदेश ५ सरकारको दावीः डेंगु महामारीको अवस्थामा पुगेको छैन | Hamro Doctor News
प्रदेश ५ सरकारको दावीः डेंगु महामारीको अवस्थामा पुगेको छैन
डेंगुका बिरामीको तथ्यांक नै फरक—फरक
रुपन्देही, २४ भदौ । प्रदेश नम्बर ५ मा डेंगु रोग महामारीको रुपमा अझै नफैलिएको सरकारी पक्षले दावी गरेको छ । प्रदेश नं. ५ मा डेंगुको संक्रमणबाट १ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने सयौं जना बिरामी भएर थला पर्दा पनि सरकारी पक्षले भने यसलाई सामान्य र विगतका वर्षभन्दा कम प्रभावित भएको बताएको छ ।
सरकारले दिने तथ्यांकमा पनि एकरुपता छैन । रिपोर्टर्स क्लव प्रदेश ५ ले मंगलबार बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै प्रदेश ५ सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव थानेश्वर ज्ञवालीले बाहिर हल्ला फैलाएजस्तो भयावह अवस्था नरहेको दावी गरे ।
उनले रोग नियन्त्रणका लागि सरकार लागि परेको जानकारी भन्दै यसमा सबैपक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरिरहेको दावी गरे ।
यस्तै प्रदेश ५ का स्वास्थ्य निर्देशक डा. बिनोद गिरीले अहिले भयावह रुपमा डेंगु फैलिन नपाएको उनले बताए । उनले प्रदेश ५ मा १सय २६ बिरामी र ८७ जना अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएको जानकारी दिए ।
गुबाट बच्नका लागि अब फुल कपडा लगाउनुपर्ने उनले सुझाव समेत दिए । व्यवहार परिवर्तन गरेर डेंगु नियन्त्रणमा सबै लाग्न डा गिरिको सुझाव छ ।
उनले हरेक दिन स्वास्थ्य निर्देशनालयले प्रदेशको डेंगुको तथ्यांक सार्वजनिक गरिने बताए ।
बुटवलको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेन्डेट डा. कृष्ण खनालले अस्पतालमा अहिलेसम्म ६९ जना डेंगुका बिरामी उपचारका लागि आएको बताए । यी मध्ये २३ जना बुटवलका र अन्य बुटवल बाहिरका भएको डा खनालले जानकारी दिए ।
उनले किट अभाव भयो भन्दै बजारमा हल्ला फैलिएको भन्दै भयावह अवस्था नरहेको दावी गरे । ९० प्रतिशत डेंगु आफै निको हुने र १० प्रतिशत हेरचाह, स्वास्थ खानपान र उपचारपछि ठिक हुने बताए ।
त्यस्तै जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख डा राजेन्द्र गिरिले रुपन्देहीमा ९० मध्ये २० जनामात्रै उपचाररत रहेको र ७० जना घर फर्किसकेको बताए । उनले सचेतना र खोज र नष्ट अभियान जारी राखिएको जानकारी दिए ।
Last modified on 2019-09-11 10:07:53